Y မြစ်ချိုရဲ. အမေပင်ပန်းနေမှာ
Yမြစ်ချို ရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ ဂုဏ်ပြု သီချင်း “ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ ပြယုဂ်”
Y မြစ်ချိုရဲ. ငါတို.ကျောင်းသား
Y မြစ်ချိုရဲ. မင်္ဂလာ၇ှိသောမေမေ
Freedomfromfearburma @ gmail.com
ဒီကေဘီအေ ဗိုလ်မှူးချုပ် စောလှဘွယ် ရဲ့ အမှာစကား
ဒီမိုကရေစီစနစ်သာလျှင် ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ လွတ်လပ်မှုနဲ့ တန်းတူမှုကို အာမခံချက်ပေးနိုင်တယ်။ ဒီမိုက ရေစီရဖို့က ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေက တက်ညီလက်ညီ တပြိုင်တည်း ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တိုက် မှရမယ်။ ဟိုတပေါက် ဒီတပေါက် လုပ်လို့မဖြစ်ဘူး။ ညီညီညွတ်ညွတ် လုပ်မှရမယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကျနော်တို့ ထောက်ခံတယ်။ ကျနော်တို့ ထောက်ခံတယ်ဆိုတာ တိုက်ပွဲနဲ့ အသက်နဲ့ရင်းပြီး ထောက်ခံတာဖြစ်တယ်။ တိုက်ပွဲပုံစံမတူပေမယ့် စိတ်တူကိုယ်တူ တထပ်တည်းပဲ။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပြည်တွင်းအင်အားစုတွေ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ပြန်စုစည်းမှရမယ်။ ဘယ်နည်းနဲ့ပဲတိုက်တိုက် ဒီစစ်အာ ဏာရှင်စနစ်က တိုက်မှရမယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ အင်အားစုအားလုံးစုစည်းညီညွတ်ဖို့လိုတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တယောက်ထဲကိုပဲ တာဝန်ပေးလို့ မဖြစ်ဘူး။ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေကလည်း အပြည့်အ ဝ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဝိုင်းရံပံ့ပိုးပေးရမယ်။ နောက်ပြီး နိုင်ငံတကာမှရှိကြတဲ့ ကျနော်တို့ အင်အားစုတွေ ကလည်း အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာ ရှိနေတဲ့ နအဖ သံရုံးတွေကို ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီး အပြင်းအထန် ဆန္ဒပြကြဖို့ လိုပါတယ်။
အဲဒီလို ဘက်ပေါင်းစုံက တက်ညီလက်ညီလုပ်ရင် ကျနော်တို့ လိုချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ၊ လွတ်လပ်မှုနဲ့ တန်းတူမှုအခွင့်အရေး တွေ အမြန်ဆုံးရမှာ သေချာတယ်။ ကျနော်ယုံကြည်တယ်။
၃ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၁ ခုနှစ်
မနေ့ ညနေမှစ၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အင်တာနက် စာမျက်နှာသို့ ပေးပို့ခဲ့သည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နှုတ်ခွန်းဆက် သဝဏ်လွှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
လုပ်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ကမ္ဘာတဝှမ်း သိရှိနိုင်စေမယ့် အင်တာနက် စာမျက်နှာတခု ပေါ်ပေါက်လာတာကို သိပ်ကို ကျေနပ်မိပါတယ်'' ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုးထားသည့် သဝဏ်လွှာထဲ၌ ရေးထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပ ပြည်သူ့ကွန်ယက်ကြီး ဖွဲ့ရာတွင် ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်း ကောင်းမွန် ကျယ်ပြန့်ခြင်းက အဓိကဟုလည်း ဆိုသည်။
''ဒီစာမျက်နှာမှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရေးကို အားသန်စွာ ထောက်ခံနေသူများ၊ ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ အဖွဲ့ချုပ် အကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိလိုသူများနဲ့ ကျမတို့ ဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့် ကျမတို့အားလုံး မျှော်မှန်း တမ်းတနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုကြီး ပိုပြီး မြန်ဆန်စွာ ပေါ်ထွန်းလာနိုင်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်” ဟုလည်း ဆိုသည်။
ဝဘ်က်ဆိုက်လိပ်စာမှာ www.nldburma.org ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် လွှင့်တင်ထားကာ ဆိုက်ထဲတွင် စည်းရုံးရေး၊ ပြန်ကြားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ နိုင်ငံတကာ၊ ဥပဒေနှင့် တိုင်းရင်းသားရေးရာ ကဏ္ဍများ ပါရှိသည်။
လူမှုရေးကဏ္ဍတွင် အရေးပေါ် လုပ်ငန်း၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများနှင့် အခြားကိစ္စများ ပါဝင်ပြီး ကျန်းမာရေးတွင် HIV ဝေဒနာရှင်များအကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာကဏ္ဍတွင် အမေရိကန်၊ အာဆီယံ၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ မြောက်အမေရိကနှင့် ဥရောပနိုင်ငံများအကြောင်း ပါရှိသည်။ ထို့ပြင် NLD လှုပ်ရှားမှု ရုပ်သံမှတ်တမ်းနှင့် ဓာတ်ပုံများပါ ဖော်ပြထားသည်။
တနင်္လာ, 31 ဇန်နဝါရီ 2011
ပြန်ပေးဆွဲထားသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား များ ‘ဆန်ရှင်’ နှင့် ရွေးမည်
Thursday, 27 January 2011 မောက္ခ နိုင်ငံတကာသတင်း
မြန်မာစစ်အစိုးရက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ကျော် ကို လွှတ်ပေးပြီး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဆွေးနွေး ခဲ့လျှင် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ ဖယ်ရှားဖို့ စဉ်းစားမည်ဟု အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး
(အရှေ့အာရှ ပိစိဖိတ်ရေးရာတာဝန်ခံ) ဂျိုးဇက် ၀ိုင် ယန်းက ဂျာကာတာပို့စ် သတင်းစာကို အင်္ဂါနေ့က ပြောဆိုခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ Lombok ကျွန်းတွင် ကျင်းပတဲ့ အာစီယံဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးတွင် အိမ်ရှင် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Marty Natalegawa နှင့် အစီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများက အမေရိက၊ အီးယူနှင့် ကနေဒါတို့မှ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားမှုအားလုံး ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ မြန်မာ စစ်အစိုးရအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပြီး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုလည်း နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွှတ်ပေးခဲ့ ပြီဖြစ်ကြောင်း အာစီယံဝန်ကြီးများက မစ္စတာယန်းကို အစည်းဝေးတွင် ၀ိုင်းဝန်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
မစ္စတာယန်းက အာစီယံဝန်ကြီးများရဲ့ တောင်းဆိုမှုများမှာ အလွန်ကောင်းမွန်ကြောင်း၊ သို့သော် စစ်အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံ တကာအသိုင်းအ၀ိုင်း တောင်းဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အရင်ဆွေးနွေးဖို့ လိုကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
“ရှင်းရှင်းလေးပါ၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လမ်းကြောင်းကသာ တိုးတက်မှု ဖြစ်ထွန်းပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာ အာဏာပိုင်တွေက အဲဒီလမ်းကြောင်းလိုက်တာနဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းဘက်က အပေါင်းလက္ခဏာ ပြလိုက်မှာပါ” ဟု ဂျာကာတာပို့စ် သတင်းစာကို ပြောကြားခဲ့သည်။
အိမ်ရှင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကိုသာ အရင်ဖယ်ရှားပေးဖို့ ဖိပြောပေ မယ့်၊ မစ္စတာယန်းက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွှတ်ပေးမှုအပါအ၀င် အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့မှု လက်တွေ့လုပ်ရပ်တွေနဲ့ စီးပွားရေးရုတ်သိမ်းမှုမှာ အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည် ပြောဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရ အကြောင်းမဲ့ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ကျော်မှာ အမြဲတမ်း နိုင်ငံတကာနဲ့ အပေး အယူလုပ်ဖို့ ပြန်ပေးဆွဲခံထားရတာ ဟု နှစ်ရှည်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ဆရာတော် အရှင်ဇ၀နမှ မောက္ခကို ပြောဆို ခဲ့သည်။
Copyright (c) 2010 FreeDom From Fear